11 / 03 / 2020 | RayHaber | raillynews
[12 / 03 / 2020] မသန်စွမ်းသောနိုင်ငံသားများအတွက်မူရာတဲရထားဘူတာကိုပြုပြင်ပြောင်းလဲလိမ့်မည်	59 Tekirdag
[12 / 03 / 2020] Diyarbakırရှိ Smart City Solutions အတွက်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုသဘောတူညီချက်	21 Diyarbakir
[12 / 03 / 2020] Ordu ကေဘယ်ကြိုးလိုင်းသည် Maintenance ဖြစ်သည်	52 ကြည်းတပ်
[12 / 03 / 2020] Gazianep သို့သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအတွက်စိတ်၏မြူနီစီပယ်ဆု	27 Gaziantep
[12 / 03 / 2020] လမ်းလျှောက်သွားသူလမ်းကူး Sekapark လမ်းရထားမှတ်တိုင်သို့ရောက်ခြင်း	41 Kocaeli
Coral virus ဗိုင်းရပ်စ်နှိမ်နင်းရေးဘတ်စ်ကားမှတ်တိုင်များတွင် Antalya Metropolitan Municipality မှအများပြည်သူသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးယာဉ်များနှင့်ပုံမှန်သန့်ရှင်းရေးများကိုပိုမိုတင်းကျပ်ခဲ့သည်။ အများပြည်သူသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးယာဉ်များနှင့်တံခါးပိတ်မှတ်တိုင်များသည်ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးအတွက်သန့်စင်ပြီးပိုးသန့်ဆေးကြရသည်။ လူမှုမီဒီယာ [ပို ... ]
တရုတ်နိုင်ငံတွင်ဖြစ်ပွားပြီးကမ္ဘာအနှံ့အပြားတွင်အလွန်ထိတ်လန့်တုန်လှုပ်စေသော Corona virus ပြီးနောက်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးယာဉ်များသန့်ရှင်းရေးသည် ပို၍ ထင်ရှားလာခဲ့သည်။ Kocaeli တွင်နေ့စဉ်လူ ဦး ရေ ၁၀၀၀၀၀ ခန့်နေ့စဉ်ခရီးသွားလာသည့်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးပန်းခြံ၊ [ပို ... ]
ကြိုတင်ထုတ်ပေးငွေနှင့်တွက်ချက်မှုအရောင်းအ ၀ ယ်များ
Cash Advance Transaction ဆိုတာဘာလဲ။ ငွေကြိုကြိုတင်ထုတ်ပေးငွေဆိုသည်မှာဘဏ်များကသူတို့နှင့်အတူအလုပ်လုပ်သော (သို့) သူတို့နှင့်အလုပ်လုပ်လိုသောဖောက်သည်များအားကမ်းလှမ်းသော ၀ န်ဆောင်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်။ အချို့အတိုးနှုန်းနဲ့လိုချင်တယ် [ပို ... ]
ကမ္ဘာ့လေဆိပ်များကောင်စီ (ACI World) မှလေဆိပ်ဝန်ဆောင်မှုအရည်အသွေးအား Ankara Esenboğaနှင့် Izmir Adnan Menderes လေဆိပ်တို့ကိုပေးအပ်ခဲ့သည်။ Hüseyin Keskin၊ အထွေထွေမန်နေဂျာနှင့်လေဆိပ်ဘုတ်အဖွဲ့ဥက္ကChairman္ဌ၊ [ပို ... ]
Gazatep စက်မှုကုန်သည်ကြီးများအသင်းက Anatolian Clusters Cooperation Platform (AKİP) ၏ ၆ ကြိမ်မြောက်ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်မှုနှင့်အမှုဆောင်ဘုတ်အဖွဲ့အစည်းအဝေးကိုကျင်းပခဲ့သည်။ ဒေသအစုအဝေးများနှင့်စပျစ်သီးပြွတ်အစပျိုးမှုများကိုပံ့ပိုးပေးရန်၊ အချင်းချင်းအပြန်အလှန်ပူးပေါင်းမှုတိုးမြှင့်ခြင်း၊ ဖွံ့ဖြိုးရေးအေဂျင်စီလေ့လာမှုများကိုပြုလုပ်ရန် [ပို ... ]
နေ့အတွင်းတွင်စတင် IETT နှင့်ÖHOယာဉ်များကိုပိုးမွှားခြင်း
IETT သည်မကြာသေးမီက Metrobus ဘူတာများ၌ပိုးသန့်ဆေးစတင်ခဲ့ပြီးညနေခင်းတွင်ဘတ်စ်ကားများအပြီးတွင်ပိုးသန့်ဆေးမှုပြုခဲ့သည်။ ယခုပိုးသန့်ဆေးလုပ်ငန်းကိုနေ့လယ်ပိုင်းသို့သယ်ဆောင်သွားသည်။ ဤအခြေအနေတွင်မတ်လ ၁၁ ရက်ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ [ပို ... ]
TÜDEMSAŞ Corona ဗိုင်းရပ်စ်အားကြိုတင်ကာကွယ်မှုများပြုလုပ်သည်
အဆိုပါအစာရှောင်ကမ္ဘာပေါ်မှာပြန့်ပွားခြင်းနှင့်တူရကီအစပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးအတွက်မြင်သန့်ရှင်းရေးလေ့လာမှုများ Corona ဗိုင်းရပ်စ်ဆန့်ကျင်အစပျိုးခဲ့ကြသည်။ TÜDEMSAŞအလုပ်သမား ၀ တ်စားဆင်ယင်ခြင်း၊ ၀ တ်စားဆင်ယင်သည့်နေရာ၊ ရေချိုးခန်း၊ A လုပ်သမားနှင့် A လုပ်သမား ၀ င်ထွက်ပေါက်ထွက်ပေါက်၊ ထမင်းစားခန်းနှင့်စုပေါင်း [ပို ... ]
Corlu ရှိဘတ်စ်ကားများသည်ကူးစက်ရောဂါများမှပိုးမွှားခြင်း၊ Tekirdağ Metropolitan Municipality သည်ကမ္ဘာပေါ်ရှိကူးစက်ရောဂါများကိုတိုးမြှင့်ရေးကိုဆက်လက်လုပ်ဆောင်ခဲ့သည်။ Tekirdağ၏အကြီးဆုံးမြို့ဖြစ်သော Tek Ulaşမှစည်ပင်သာယာရေးဘတ်စ်ကား ၉၅ ခု [ပို ... ]
EGO နှင့်ပုဂ္ဂလိကအများပြည်သူသုံးဘတ်စ်ကားများနှင့်မီးရထားစနစ်များအပြီးနေ့တိုင်းသောင်းနှင့်ချီသောခရီးသည်များလာရောက်လည်ပတ်သည့် Ankara မြို့ပြမြူနီစီပယ်မြို့နယ်၊ ရောဂါကူးစက်မှုအန္တရာယ်နှင့် ပတ်သက်၍ မီနီဘတ်စ်များတွင်လည်းပိုးသန့်ဆေးနှင့်ပိုးသတ်ခြင်းလေ့လာမှုများပြုလုပ်ခဲ့သည်။ [ပို ... ]
Gebze OIZs ရှိ Traffic Density ကိုiantရာမစီမံကိန်းကြီးဖြင့်လျှော့ချလိမ့်မည်
Kocaeli Metropolitan မြူနီစီပယ်ကသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအတွက်သက်တောင့်သက်သာဖြစ်စေမည့်၎င်း၏စီမံကိန်းများအတွက်အသစ်တစ်ခုထပ်ထည့်သည်။ ဤ ဦး တည်ချက်တွင် Metropolitan မြူနီစီပယ်သည် Gebze OSB ဒေသများနှင့် Gebze ခရိုင်စင်တာကြားရှိ TEM အဝေးပြေးလမ်းမကြီးပေါ်ရှိယာဉ်ကြောသိပ်သည်းဆကိုလျှော့ချရန်ဖြစ်သည်။ [ပို ... ]
Busworld Bus Fair တွင် Kocaeli လေ
Kocaeli Metropolitan မြူနီစီပယ်သည်အစ္စတန်ဘူလ်တွင်ကျင်းပသည့်ဘတ်စ်ကားလုပ်ငန်းနှင့်စက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းရှင်များအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာကုန်စည်ပြပွဲ (Busworld International) တွင်ပါ ၀ င်ခဲ့သည်။ Metropolitan Program ကိုယ်စားသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးဌာနအကြီးအကဲ Ahmet Çelebiနှင့် Metropolitan လက်အောက်ခံကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်သော TransportationPark A.Ş. [ပို ... ]
TÜDEMSAŞသည် Sivas အားလုံး၏ Red Line ဖြစ်သည်
TÜDEMSAŞ၏အထွေထွေညွှန်ကြားမှု၏အရည်အသွေးကိုလျှော့ချရန်ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့်ပုဂ္ဂလိကပိုင်ပြုလုပ်ရေးအစီအစဉ်များကို အလေးထား၍ ရီပတ်ဘလီကန်ပြည်သူ့ပါတီ Sivas အမတ်Ulaş Karasu က“ ရောင်းစရာဘာမှမရှိဘူး၊ ပင်လယ်ကုန်သွားပြီ။ ယနေ့ဤတွင် '' လျင်မြန်စွာဆုံးဖြတ်ချက်ယခုTÜDEMSAမှာဖြစ်ပါတယ် [ပို ... ]
အသေးစားတီထွင်သူများထံမှကြိုးမဲ့အားသွင်း Smart လမ်းမကြီးစီမံကိန်း
ကမ္ဘာတလွှားရှိနိုင်ငံပေါင်း ၈၀ တွင်ကျင်းပသည့်ပထမအကြိမ် Lego အဖွဲ့ (FLL) တွင်ပြုလုပ်ခဲ့သည့် 'ကြိုးမဲ့အားသွင်းခြင်းစမတ်အဝေးပြေးစနစ်များ' စီမံကိန်းနှင့်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာတီထွင်မှုလုပ်ပိုင်ခွင့်အတွက်အမည်စာရင်းတင်သွင်းခံရသည့်Bahçeşehirကောလိပ်ကျောင်းသားများ Bursa Metropolitan Municipality မြို့တော်ဝန်မြို့တော်ဝန် Alinur Aktaş။ [ပို ... ]
မြေအောက်ရထားဝန်ထမ်းများသည်ပျောက်ဆုံးသွားသော Autistic ခရီးသည်များအားသူတို့၏မိသားစုများသို့ပို့ဆောင်ပေးခဲ့သည်
Burak Mustafa Gülenသည်အထီးကျန်စိတ်ဝေဒနာခံစားခဲ့ရပြီး၊ သူ၏ဆွေမျိုးများKüçükçekmeceတွင်ပျောက်ဆုံးသွားကြောင်းသိရှိရသောÇekmeköyမက်ထရိုဘူတာရှိလုံခြုံရေး ၀ န်ထမ်းများကသူ၏မိသားစုအားပြန်လည်ပို့ဆောင်ခဲ့သည်။ Üsküdar - Çekmeköyသည် ၂၀၂၀၊ မတ်လ ၆ ရက်၊ သောကြာနေ့ ၂၃း၁၅ တွင် [ပို ... ]
Karaman ၏စည်ပင်သာယာ Coronavir ဆန့်ကျင်အရေးယူဆောင်ရွက်သည်
Diyarbakırရှိ Smart City Solutions အတွက်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုသဘောတူညီချက်
Ordu ရှိမြို့ရှိ Corona ဗိုင်းရပ်စ်နှိမ်နင်းခြင်းဆိုင်ရာလေ့လာမှု
Ordu ကေဘယ်ကြိုးလိုင်းသည် Maintenance ဖြစ်သည်
လမ်းလျှောက်သွားသူလမ်းကူး Sekapark လမ်းရထားမှတ်တိုင်သို့ရောက်ခြင်း
Bursa City Hospital Metro Line သည်တင်ဒါပြင်ဆင်နေသည်
Corona ဗိုင်းရပ်စ်ကြောင့် Istanbul Sofia ရထားခရီးစဉ်များခေတ္တရပ်နားသည်
Afyonkarahisar ရှိအများပြည်သူသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးယာဉ်တွင် Coronavirus ကာကွယ်ခြင်း
တင်ဒါကြေငြာခြင်း - လျှာဝယ်ခြင်းနှင့် UIC60 ကတ်ကြေးများအတွက် Belly အထူးရွေးချယ်ခြင်း
12: မတ်လ 11 00 @ - 17: 00
ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးသတိပြုပါ: B-70 အိပ်ပျော်ယ်ယူရန် Concrete ပါလိမ့်မယ်
12: မတ်လ 14 00 @ - 15: 00
တင်ဒါကြေငြာချက် - S-49 Scissors အတွက် Navel အထူးရွေးချယ်ခြင်းကိုလက်ခံခြင်း
12: မတ်လ 14 30 @ - 15: 30
တင်ဒါကြေငြာချက် - Izmir Suburban လိုင်းရှိမီးရထားလမ်းပြုပြင်ခြင်း
16: မတ်လ 14 00 @ - 15: 00
တင်ဒါကြေငြာချက် - ဘရိတ်စမ်းသပ်မှုစနစ်နှင့် Bogie Chassis Static နှင့်ပင်ပန်းနွမ်းနယ်မှုစမ်းသပ်စနစ်
17: မတ်လ 14 30 @ - 15: 30
တင်ဒါကြေငြာချက် - ဘရိတ်စမ်းသပ်ခြင်းစနစ်နှင့် Bogie Chassis Static နှင့်ပင်ပန်းနွမ်းနယ်မှုစမ်းသပ်စနစ်
တင်ဒါကြေငြာချက် - Mersin Metro ဆောက်လုပ်ရေးနှင့်မော်တော်ယာဉ် ၀ ယ်ခြင်းတင်ဒါ (တင်ဒါဖျက်သိမ်းခြင်း)
18: မတ်လ 14 00 @ - 15: 00
တင်ဒါကြေငြာချက် - ပေါင်းပင်ထိန်းချုပ်မှုအတိုင်းအတာအတွင်းဓာတုဆေးဝါးများ ၀ ယ်ခြင်းအပါအဝင်ဆေးဝါး
တင်ဒါကြေငြာချက် - ကုန်တင်ယာဉ်များ၏မြေပြင်ပြင်ဆင်ခြင်းလုပ်ငန်း ၀ န်ဆောင်မှုကိုလက်ခံလိမ့်မည် (TÜDEMSAŞ)
တင်ဒါကြေငြာချက် - ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းများကို Alsancak၊ Selçuk, Turgutlu ရထားဘူတာနှင့်ဘူတာရုံများ၌ပြုလုပ်မည်။
19: မတ်လ 14 00 @ - 15: 00
Çayırovaနှင့် Gebze Roads ၏တင်ဒါရလဒ်
Kayaş Irmak KırıkkaleÇetinkayaလျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေးစက်ရုံများဆောက်လုပ်ရေးတင်ဒါရလဒ်
Afyon Gar Kocatepe တက္ကသိုလ်မီးရထားစီမံကိန်းများပြင်ဆင်မှုတင်ဒါ
Samsun Metropolitan Municipality သည်ပြည်သူ့ဝန်ထမ်း ၁၃၄ ယောက်ကိုခန့်ထားလိမ့်မည်
TÜBİTAK 95 R&D ၀ န်ထမ်းကိုခန့်အပ်မည်
TCDD Tasimacilik 184 ၀ န်ထမ်းခေါ်ယူမှုခံတွင်းစာမေးပွဲရက်နှင့်နေရာကြေငြာချက်
ကမ်းခြေစောင့်တပ်ဖွဲ့Erbaşကို ၀ ယ်ရန်ကျွမ်းကျင်သူ ၁၇၅ ဦး
TÜVASAŞ 20 စဉ်ဆက်မပြတ်စုဆောင်းမှုခံတွင်းစာမေးပွဲရလဒ်များကိုကြေငြာခဲ့သည်
Samsun Amisos Hill Cable Car လိုင်းတွင်ဆောင်ရွက်မည့်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုလုပ်ငန်း
TRNC ၀ န်ကြီးချုပ်တာရတ် Erciyes ၀ မ်းသာသည်
TCDD အထွေထွေမန်နေဂျာ Uygun ၏မတ်လ ၈ ရက်၊ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအမျိုးသမီးများနေ့
TCDD သည်ရထားဘူတာနှင့်စခန်းများရှိ Corona ဗိုင်းရပ်စ်အတွက်ကြိုတင်ကာကွယ်မှုများပြုလုပ်သည်
Underpasses နှင့် Overpasses သည်မြို့တော်၌ပိုမိုလုံခြုံသည်
Dacia March လှုပ်ရှားမှုများနှင့်စျေးနှုန်းများ
Cadillac Lyriq အသစ်ကိုAprilပြီလသို့ရွှေ့ဆိုင်းခဲ့သည်
Lotus Elektrik Evija သည်စျေးမထွက်မီရောင်းချခဲ့သည်
TÜLOMSAŞ၏အမျိုးသား YHT စီမံကိန်းသည်အလားတူကံကြမ္မာနှင့်အတူအသက်ရှင်လိမ့်မည်!
KSO ညီလာခံတွင် Altay သည် Konya Metro နှင့် KonyaRay အကြောင်းသတင်းအချက်အလက်များကိုပေးခဲ့သည်
Burkina Faso မီးရထားအကြောင်း
၂၀၂၁ ခုနှစ်တွင် Karasu မီးရထားလမ်းစီမံကိန်းပြီးဆုံးမည်
ပါကစ္စတန်၌ရထားနှင့်ဘတ်စ်ကားတိုက်မိခြင်း ၂၀ သေ၊ ၅၅ ဦး ဒဏ်ရာရ